Suuqgeynta Tooska ah wey isbadashay - Ma ahan Xeerka 40/40/20 | Martech Zone
Axad, Agoosto 26, 2007 Monday, August 27, 2007 Douglas Karr
Waxaan abaabulayay buug-yaraheyga buugga saaka waxaanan dhex rogay buug duug ah oo Suuqgeynta Tooska ah oo aan hayey, oo ah Tirada Tooska ah ee Tirada. Waxaa daabacay Xafiiska Boosta Mareykanka wuxuuna ahaa hage wanaagsan oo hagaagsan. Markii aan toos u dirayay, waxaan aaday Boostada maxaliga ah oo waxaan ka helay sanduuq ka mid ah. Markii aan la kulannay macmiil aan waligood hore u samayn Boostada Tooska ah, waxay u ahayd kheyraad aad u wanaagsan iyaga inay si dhakhso leh u bartaan faa'iidooyinka suuqgeynta tooska ah.
Dib-u-eegista buugga maanta, waxaan gartay sida ay wax isu beddeleen tobankii sano ee la soo dhaafay - xitaa sannadihii ugu dambeeyay.
Aragtidii hore ee suuqgeynta tooska ahayd waxay ahayd 40/40/20 Rule:
40% natiijada waxa keenay liiska aad dirtay. Kani wuxuu noqon karaa liistada aad u soo iibsatay rajada ama waxay ka koobnaan kartaa liiska macaamiishaada hadda jira.
40% natiijada waxay sabab u ahayd dalabkaaga. Waxaan had iyo jeer macaamiisha u sheegaa in waqtiga aad ku qaadatay olole toos ah oo boosteejo ah si aad u soo jiidato rajada ay la mid tahay tirada tallaabooyinka u dhexeeya sanduuqa boostada iyo qashinka.
20% natiijada waxaa sabab u ahaa hal-abuurkaaga. Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaan ka helay warqad toos ah guri-dhise cusub. Dhexdeeda ayaa fure u ahayd in lagu tijaabiyo guriga tusaalaha ah. Haddii fure u dhigmo, adiga ayaa ku guuleysanaya guriga. Taasi waa dalab xiise leh oo aniga igu kicin kara inaan u kaxeeyo bulshada ugu dhow - hal abuur badan.
Boostada Tooska ah iyo Telemarketing ayaa adeegsaday sharcigan suulka labaatankii sano ee la soo dhaafay. Ha u wacin Diiwaanka iyo fal-dambiyeedka 'CAN-SPAM' waxay caddeeyeen in macaamiisha ay ka daaleen faragelinta oo aysan u dulqaadan doonin weydiisasho rukhsad la'aan. Xaqiiqdii, waxaan aaminsanahay in ogolaansho la’aan ay saameyn taban ku yeelan doonto ololahaaga oo ay mudan tahay in la kordhiyo muhiimadda Liiska.
Ereyga Af Suuqgeyntu hadda waa qayb muhiim ah oo ka mid ah suuqgeynta shirkad kasta - laakiin ma leh waaxda suuqgeynta, ee waxaa iska leh macmiilka. Haddii aadan fulin karin ballanqaadyadaada, dadku way maqli doonaan taas si ka dhakhso badan waqtiga ay ku qaadato fulinta ololahaaga. Ereyga ku saabsan suuqgeynta afka ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doonta olole kasta oo suuqgeyn ah. Haddii aadan wax bixin karin, markaa ha ballan qaadin.
Carrabka ugama daadanayo sida fudud, laakiin waxaan aaminsanahay in sharciga cusubi yahay midka 5-2-2-1 Rule
50% natiijooyinka waxaa sabab u ah liiska aad u dirtay oo muhiimadda ugu weyn liistadaas ay tahay oggolaanshaha ay tahay inaad la hadasho iyaga iyo sidoo kale sida bartilmaameedku yahay liiska.
20% natiijooyinka waxaa u sabab ah fariinta. Bartilmaameedka fariinta dhagaystayaasha waa lama huraan. Farriinta saxda ah ee dhagaystayaasha saxda ah waqtiga saxda ah ayaa ah habka kaliya ee lagu hubiyo inaad ilaalin karto rukhsadda oo aad ku heli karto natiijooyinka aad ugu baahan tahay dadaalka suuqgeyntaada.
20% natiijooyinka waxaa sabab u ah Soo Degitaanka. Suuqgeynta emaylka, tani waa bogga soo degitaanka iyo adeegga xiga iyo fulinta badeecada ama adeegga. Haddii aadan bixin karin ballanqaadyadii aad suuq gaysay, markaa hadalka afka ayaa farriintaas ka soo saari doona si ka dhakhso badan inta aad isku dayi karto inaad xajisto. Waa inaad si fiican u “degtaa” macmiilka si aad u hesho koboc guul leh mustaqbalka.
10% weli waa hal-abuurka ololahaaga suuq-geynta. Waxaad u maleyn kartaa in aan dhahayo hal-abuurnimadu waa ka muhiimad yartahay kuwii hore - taasi run maahan run - ogolaansho, fariinta, iyo degitaankuba waa ka muhiimsan yihiin sidii ay ahaan jireen.
Sharcigii hore ee 40/40/20 ee suuq geynta tooska ah waligiis tixgalin rukhsad ma helin, suuq geyn afka ah, ama fulinta sheygaaga iyo adeegaaga. Waxaan qabaa 5-2-2-1 Xeer sameeyaa!
Agoosto 26, 2007 saacaddu markay ahayd 9:36 PM
Waa inaan idhaahdaa isku xirkaaga xayeysiinta oo ah safka ugu horeeya ee qoraal kasta oo blog ah wuxuu ka dhigayaa mid aad u adag go'aan ka gaarista waxa aan doonayo inaan ka akhriyo FeedDemon. Maaddaama aanan helin sadarka koowaad mar dambe, waxaan helayaa xayeysiinta oo keliya, inta badan waxaan si fudud u calaamadeeyaa dhammaan quudinta sida loo akhriyo iyadoon la gelin.
In kasta oo aan fahamsanahay baahida loo qabo in la kordhiyo soo-gaadhista, waxaan si naxariis leh u soo jeedin lahaa in laga yaabo in la galiyo xayeysiiska qoraalka dhajinta halkii laynka koowaad u oggolaan lahaa in nuxurkaagu noqdo mid soo jiidasho leh oo u oggolaanaya dadka aniga oo kale ah inay si caqli-gal ah u go'aansadaan haddii daawashadaada dhajinta waa fikrad fiican ama maya.
Agoosto 26, 2007 saacaddu markay ahayd 9:54 PM
Tim, taasi waa jawaab celin weyn. Waxaan ogaaday in naftayda kadib markaan dhajiyay oo aan iska hilmaamay… caawa waxaan u dhaqaaqay dhanka hoose ee quudinta. Waad ku mahadsantahay waqtiga aad siisay inaad ila soo socodsiiso. Runtii waan ku qanacsanahay!
Agoosto 26, 2007 saacaddu markay ahayd 10:17 PM
Doug, waad ku mahadsan tahay inaad fahanto oo aad jawaab celiso.